इन्टिमेट सिनले करिअरलाई घात गर्दैन : प्रमोद अग्रहरी « THULOPARDA.COM
इन्टिमेट सिनले करिअरलाई घात गर्दैन : प्रमोद अग्रहरी
Published On : September 11, 2018
कलाकार प्रमोद अग्रहरी हेवी स्वर भएका लोकप्रिय कलाकार हुन् । नवलपरासीमा जन्मिएका प्रमोद सन् २००४ देखि नै कलाकारितामा सक्रिय छन् ।
अभिनयको कक्षा नलिई चलचित्र क्षेत्रमा प्रवेश गर्दा प्रतिस्पर्धाको दुनियाँमा पछि परिन्छ भनेर नेपाल आएर पनि उनले नाटकमा अभिनय गरे । जसले उनलाई थप तिखार्दै लग्यो ।
चलचित्र ‘उमा’ मा माओवादी छापामार बनेर देखा परेका उनले त्यसपछि दर्जन बढी चलचित्रमा फरक-फरक चरित्र निभाए ।
मधेशी पात्रमा मात्र टाँसिएर बसेको आरोप खेपिरहेका उनको नयाँ चलचित्र ‘कथा काठमाण्डू’ असोज १२ गते प्रदर्शनमा आउँदैछ । यो चलचित्र गीतसंगीत र ट्रेलरका अहिले निकै चर्चामा छ । उनी यो फिल्म ‘सञ्जीवनी बुटी’ साबित हुनेमा आशावादी छन् ।
अभिनेत्री प्रियंका कार्कीसँगको इन्टिमेट सिनका कारण यतिबेला सबैको नजरमा परेका उनी उक्त चलचित्रलाई आफ्नो करिअरको दोस्रो अध्याय भन्न रुचाउँछन् । अन्य चलचित्रभन्दा भूमिका पनि फरक रहेको उनको भनाई छ ।
पढ्नुहोस् उनीसँग चलचित्रको विषयमा गरिएको विशेष कुराकानी :-
१. प्रियंकासँगको इन्टिमेट सिन करिअरका लागि घातक बन्ला ?
मलाई त्यस्तो लाग्दैन । म एउटा कलाकार हुँ । कलाकार भएपछि हामीले हरेक किसिमको क्यारेक्टर गर्नुपर्ने हुन्छ । सँगसँगै समाजप्रति उसको एकखालको नेतृत्व पनि हुन्छ । आफूले गरेको कामबाट समाजलाई राम्रो हुन्छ र सन्देश दिन्छ भने किन नगर्ने ?
नेपाली चलचित्रको ५५ वर्षको इतिहास छ । तर, किन मुम्बईया चलचित्र मात्र बन्यो हामीकहाँ ? हाम्रो कथालाई किन कहिल्यै ल्याइएन ? यो काहिँबाट त सुरु हुनु नै थियो र ‘कथा काठमाण्डू’ बाट भयो । मलाई लाग्दैन इन्टिमेट सिनकै कारण मेरो करिअरलाई घात हुन्छ ।
२. गीतसंगीत र ट्रेलरबाट पोजेटिभ र नेगेटिभ कमेन्ट कस्तो पाइरहनु भएको छ ?
पहिला जसरी गीत रिलिज भयो केही नेगेटिभ कमेन्टहरु आएका थिए । सँगै केही पोजेटिभ पनि थिए । तर, मात्रामा हेर्ने हो भने नेगेटिभ कमेन्ट बढी थिए । पहिलो पटक गीत हेर्दा धेरैलाई छाडापन लाग्यो ।
तर, पछि हेर्दै जाँदा गीतमा कथा, क्यारेक्टर र पिडा भेट्न थाल्नुभयो । ट्रेलरसम्म आइपुग्दा भने अधिकांशलाई एउटा पखाई नै भएको छ । अहिले सबैले राम्रो भन्नुभएको छ ।
३. ‘कथा काठमाण्डू’ लाई तपाईको करिअरको दोस्रो अध्याय भन्दा गलत हुन्छ ?
म यहाँसम्म आइपुग्नुको कारण मेरा सबै क्यारेक्टर रुचाइदिएर नै हो । मैले अहिलेसम्म जति पनि चलचित्र गरे तीबाट मलाई राम्रो नै भएको छ । चाहे सफल भएका हुन् वा दुई दिनमै उत्रिएका किन नहुन ।
मेरा यसअघिका चलचित्र राम्रो हुँदैन थियो भने मलाई संगीता श्रेष्ठले ‘कथा काठमाण्डू’ मा कास्ट पनि गर्दिन थिइन् होला । यो चलचित्रलाई म करिअरको दोस्रो अध्याय मान्न भने तयार छु ।
४. फिल्ममा निभाएको भूमिका पहिलादेखि नै गर्न मन थियो ?
मलाई त समाजमा देखिने हरेक क्यारेक्टर गर्नु छ । तर, रियालिटी बेसमा भएर । चाहे त्यो रिक्स चलाउने होस् वा मकै पाल्ने नै किन नहोस् । मलाई सबै क्यारेक्टर गर्न मन छ ।
५. नयाँ निर्देशक हुनुहुन्छ संगीता श्रेष्ठ । के विश्वास थियो हुबहुँ स्क्रिप्ट पर्दामा उतार्न सक्नुहुन्छ भन्ने ?
हुबहुँ त थाहा छैन । मलाई के विश्वास थियो भने त्यो क्यारेक्टर एउटा जन्मिन्छ । म आफूभित्रबाट जन्माउँछु । मैले देखेका कुराहरुबाट जन्माउँछु । संगीताले जे भन्न भनेको छ त्यो स्पष्ट रुपमा आउँछ भन्नेमा मलाई शंका थिएन ।
६. आफूलाई मधेशी पात्रमा मात्र अल्झाइयो भन्ने तपाईको गुनासो थियो । यो फिल्मबाट कति टाढा हुनुहुन्छ ?
फरक छ । गएको ६ वर्षमा मेरो १२/१५ वटा फिल्म रिलिज भयो त्यसमध्ये यसमा आकाश- जमिनको फरक पाउनुहुन्छ । लुक्स, पर्सानालिटी, भाषा र मनोविज्ञान एकदमै फरक छ ।
बरिष्ठ कलाकार जयनन्द चन्द ठकुरीको निधन भएको छ । सयभन्दा बढी चलचित्रमा जीवन्त अभिनय गरेका
चिरञ्जीवि, जिवेश र प्रविनले ल्याए ‘इतिहास’ (भिडियो)
जीवि चिरण, जिवेश गुरुङ र प्रविन भट्टको स्वरमा रहेको ‘इतिहास’ बोलको गीतको भिडियो सार्वजनिक भएको
अमृतको ‘जहाजै चढेर’ सार्वजनिक (भिडियो)
गायक अमृत क्षेत्रीको स्वरमा रहेको ‘जहाजै चढेर’ बोलको गीत सार्वजनिक भएको छ । सुरशाला स्टुडियोको